eNasha.com - जोहेबको नयाँ फड्को
जोहेबको नयाँ फड्को
जोहेब मानन्धरलाई तपाइँले पप गायकका रुपमा मात्र चिन्नु भएको भए अब त्यो गलत पनि हुनसक्छ । ९ कक्षा पढ्दापढ्दै गीत रेकर्ड भ्याएका ३१ वर्षे तन्नेरी गायक अब आफैँ सङ्गीत कम्पनी खोल्ने तयारीमा छन् ।
"केही साथीहरुसँग यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ", जोहेबले भने- "मिल्यो भने यसै वर्षभत्र सङ्गीत उद्योगमा नयाँ कम्पनीको जन्म हुनेछ ।"
त्यसो त कुनै गायकले सङ्गीत कम्पनी खोलेको यो नयाँ भने हुने छैन । सम्झना अडियो भिडियोका रमन सिंह, रियाज म्युजिकका लगानीकर्ता सुमन श्रेष्ठ, श्री म्युजिकका चन्द्र दोङ तामाङ, सुरताल म्युजिकका आलोकश्री, राजन मुकारुङ, ... यस्ता नामको एउटा गतिलै सूचि तयार हुन सक्छ ।
यी कलाकारको साझा अनुभूति चाहिँ कम्पनीले चाहिँदो सहयोग नगरेकोमा चित्त दुखाइ नै हो । आफ्ना एल्बमको बजारमा नाम भए पनि उचित दाम पाउन नसकेको रिस साँध्न कतिपयले कम्पनी खोलेका छन् ।
"तर मेरो त्यस्तो केस भने होइन", स्पष्टीकरणको लवजमा जोहेब भन्छन्- "मलाई के लाग्यो भने अन्य कम्पनीहरु अहिले सुस्ताइरहेका छन् र सङ्गीत उद्योगमा उनीहरुले पुर्‍याउनु पर्ने जुन योगदान छ, त्यो कम भइरहेको छ ।"
जोहेबलाई व्यापारको राम्रै अनुभव छ । केही फूर्सदिला वर्षहरुमा उनले सङ्गीतलाई माया मारेर दुबईमा रेष्टुराँसमेत चलाए । त्यहाँ नेपाली सङ्गीत र मनोरञ्जन प्रति दर्शक श्रोताको माया देखेर उनी भाव विभोर भएका छन् । त्यहाँको अनुभव र यहाँको मिहिनेत मिल्न सकेको खण्डमा मनोरञ्जन उद्योगमा सानो योगदान गर्न सकिने सम्भावना उनले देखेका छन् । "यो त्यही सम्भावनाको दोहन गर्ने प्रक्रिया हुनसक्छ", जोहेबले भने- "जुन अन्य कम्पनीको भन्दा फरक 'एप्रोच' भएकाले शायद म बजारमा टिक्न सक्छु ।"
त्यसो त नेपाली सङ्गीत उद्योगमा केही क्रान्तिकारीहरु परिवर्तनको सम्वाहक भएर नआएका पनि होइनन्, तर समयक्रममा ती हराए पनि ! मूनलाइट रेकर्ड्स् कलाकारको दाम ह्वात्त बढाउनका लागि चर्चित रह्यो भने सम्झना अडियो भिडियो कलाकारहरुलाई लोकप्रिय बनाउन भूमिका खेल्ने संस्था बन्यो । मूनलाइटको अहिले अस्तित्व छैन भने सम्झना अडियो भिडियो लगभग निस्क्रिय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सोच र जाँगर बोकेर यदि जोहेब आए भने सम्भव होला त ? भन्ने आशंका नउब्जिने पनि होइन ।
तर जोहेबले बुझेको सत्यलाई उद्योगले त्यत्तिकै उपेक्षा गर्न पनि त सक्तैन !
ट्रयाक बाहिर गायक रिलिज सङ्गीतकार समुद्रपार लुकेका कुरा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड नेपाली तारा उपलब्धि प्रेम र विवाह भिडन्त विचार पेज थ्री रुचि गायिका गीतकार कन्सर्ट